OTA-21 dia tonga miaraka amin'ny fikasihana farany amin'ny dikan-teny mifototra amin'ny 16.04 | Ubunlog
OTA-21 dia tonga miaraka amin'ny fikasihana farany ho an'ny dikan-teny mifototra amin'ny Ubuntu 16.04
Tsy fantatro raha ho an'ny OTA-30 izany, fa amin'ny fotoana iray dia ho marina isika. UBports dia niasa hatry ny ela mba hamerenana indray ny Ubuntu Touch amin'ny Focal Fossa (20.04), fa inona dia manafaka antsika Mbola dikan-teny mifototra amin'ny Xenial Xerus (16.04) izy ireo. Ora vitsy lasa izay nanao ofisialy izy ireo ny fanombohana ny OTA-21, miaraka amin'ny isa samihafa ho an'ny PinePhone sy PineTab, ary mbola mandiso fanantenana fa mbola miorina amin'ny version of Ubuntu izay tsy notohanana intsony tokony ho sivy volana lasa izay.
Ubuntu 16.04 Xenial Xerus dia tonga tamin'ny Aprily 2016. Amin'ny maha dikan-teny LTS azy dia notohanana hatramin'ny Aprily tamin'ny taon-dasa, saingy ny marina dia tsy dia maharary loatra izany rehefa mahatsiaro fa, farafaharatsiny amin'ny PineTab, dia tsy afaka mametraka programa miaraka amin'ny GUI avy amin'ny tranokala ofisialy . Ny zavatra voalohany lazain'izy ireo amintsika momba ny OTA-21 dia izy io mifototra amin'ny Xenial Xerus, ka tsy maintsy manohy manam-paharetana isika raha te hanao ny hitsambikina.
Zava-nisongadina tamin'ny Ubuntu Touch OTA-21
Miorina amin'ny Ubuntu 16.04.
Efijery tongasoa nohavaozina, izany hoe ny efijery idiranao ny PIN na ny tenimiafinao.
Compass sy magnetometer ho an'ny fitaovana mifototra amin'ny Halium 9 na aoriana.
Fahafahana mamafa ny lisitry ny antso farany na tsy hita.
Pejy fitahirizana nohatsaraina ao amin'ny firafitry.
Heverina fa efa raikitra ny fahafahana manampy kaonty Google.
Afaka miditra amin'ny mikrô ny navigateur default.
Fanatsarana ny fanohanana ny MMS; Raha misy hafatra tsy nalaina dia mampandre antsika ilay fitaovana.
Libmedia-hub-qt dia navadika ho an'ny serivisy media-hub.
Vaovao mifandraika amin'ny OTA-21 azo alaina izao amin'ny fantsona stable, mba ahafahan'ny mpampiasa rehetra mametraka azy amin'ny rafitra fiasana iray ihany. Ny UBports dia miasa mafy mba hifindra amin'ny fametrahana ny rafitra fiasany amin'ny Ubuntu 20.04, saingy tsy hilaza izahay fa efa ho ny OTA-22. Ny hany zavatra azo antoka dia efa tonga ny 21, ary nahavita izany tamin'ny vaovao manan-danja vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu Phone » OTA-21 dia tonga miaraka amin'ny fikasihana farany ho an'ny dikan-teny mifototra amin'ny Ubuntu 16.04
Aleo omena fotoana ny programmer fa vitsy izy ireo ary manao izay azony atao, azo antoka fa raha ny azy ireo dia efa tao amin'ny 20.04 isika. Mitaky fotoana maharitra ny fiovana.
Ny ampahany tsara fa mbola tsy miorina amin'ny 20.04 dia ny fitaovana izay tsy afaka mitsambikina amin'ny 20.04 dia hanana fanohanana tsara kokoa mba hahafahan'ireo mpampiasa azy hanohy hampiasa azy ireo mandritra ny fotoana maharitra amin'ny toe-javatra tsara kokoa.
Valiny tamin'i Josu
Fausto Minuzzo dia hoy izy:
Intanto a big Grazie per le informazioni su molteplici applicazioni.
Nanome opportunità foana aho.
Te-hanohy vatofantsika aho.
23 hatramin’ny 2022
Valiny an'i Fausto Minuzzo
Linux Mint 20.3 dia efa navoaka ary ireo no vaovao
KDE Gear 21.12.1 Tonga miaraka amin'ny fanamboarana 150+ ho an'ny App Set Desambra 2021